Kana Yechina-Vatambi Vasingakwanise Kuverenga: Imwe Phoenix Chikoro Ine Nzira Itsva Yokurwisa Denda Rekufunda Kurasikirwa - lesmeilleursastuces.com
PHOENIX – Mangwanani-ngwanani achangopfuura, gumi vegiredhi rechina vakagumbatira mudenderedzwa pasi pamusoro pemagineti mapuratifomu, vachifambisa mataera ane mavara kuti vapere izwi rimwe chete rechirafu iro mudzidzisi wavo, Katerah Layne, akashevedzera.
“Rub” akadaro mai Layne. Vadzidzi pavakachinjisa mataira avo, vaviri vakakavhiringidza mavara “b” na “d.”
“Kwakanaka kuvhiringidzika,” Mai Layne vakasimbisa vadzidzi.
Tevere, iye akadana shoko rokuti “hove.” Vadzidzi vese vakaperetera nemazvo. “Tese takawana izwi rekuti ‘i’. Ndinodada nemi, ”vakadaro Mai Layne.
Kudonha kwega kwega, vangangoita vadzidzi vashanu vanouya kukirasi yaMai Layne kuSevilla Elementary School East muPhoenix vachisara kumashure kwehunyanzvi hwekuverenga-giredhi rechina. Gore rino, akashamisika kuwana ingangoita hafu yevadzidzi vake makumi maviri neshanu vakaedzwa kukireshi kusvika kumatanho ekuverenga egiredhi rekutanga.
Kana denda rikavhiringidza zvikoro muchirimo 2020, vadzidzisi vakafungidzira kudzidza kure kuchamisira vana vazhinji kukundikana, kunyanya vadzidzi vevara uye avo vanobva kumhuri dzinotambura. Muedzo wekuyedza kubva pamwedzi yekutanga yekufunda kure wakaratidza vadzidzi vachidonha mwedzi mushure mukuverenga uye math. Kudonha uku, sezvo vadzidzi vazhinji vakadzokera kudzimba dzekudzidzira kekutanga mushure memwedzi gumi nemisere yekukanganiswa, vamwe vadzidzisi vakaona kurasikirwa kwekudzidza kwakanyanya kudarika zvaifungidzirwa.
Mamiriro ezvinhu akaipisisa mumakirasi akaita saAmai Layne, ari muAlhambra Elementary School Dunhu uko vabereki vazhinji vanoshanda mabasa eawa mukuvaka, kuchenesa nekudyira-chikafu chikafu. Dunhu rakatarisana nedambudziko riri kukura mukuverenga mumakore gumi nemashanu apfuura. Asi denda iri rakachinja kuita dambudziko: Muedzo wakapihwa mwedzi uno kuyera kuti vangani vadzidzi vakasangana nematanho ehurumende-chikamu chakaratidza kuti chevane makumi mana nevaviri kusvika makumi maviri nevaviri kuSevilla East, 58% vakatsunga kuve vane hunyanzvi avo epakati-giredhi zviyero zveChirungu Mitauro Yehunyanzvi-iyo yakaderera chinzvimbo.
Makirasi ese kuSevilla East ikozvino anosanganisira chinhu chekuverenga, kusanganisira dzidzo yemuviri nemumhanzi.
Pakati pegore rechikoro ra2020-21, mwero wekuti vadzidzi vadzidze nyika yese wainonoka pamapoka ese evadzidzi, zvisinei nerudzi, dzinza kana huwandu hwemari, zvichienzaniswa nenhoroondo dzezvakaitika denda risati rasvika, sekutaura kwaChikunguru NWEA, Oregon- yakavakirwa isingabatsiri dzidzo-masevhisi akasimba. Kubudirira kwemasvomhu kwaive kwakaringana gumi neshanu muzana mapaundi ezasi muchirimo cha2021 zvichienzaniswa neyakajairika gore. Kuverenga kugona kwakadzikira nezvakawanda se6 percentile poindi zvichienzaniswa nedenda risati rasvika, pakati pevadzidzi vese. Mhedzisiro yacho inouya kubva kungangoita 5.5 mamirioni echitatu- kuburikidza nevasere-giredhi vadzidzi muzvikoro zveveruzhinji zve12,500 vakatora bvunzo mu2018-2019 uye mugore rechikoro ra2020-2021.
Asi kudonha kwekuverenga zvibodzwa pakati peVatema neLatino vadzidzi vegiredhi rechina yaive, paavhareji, yakapetwa kaviri iya yevachena uye veAsia-America vadzidzi. Panguva imwecheteyo, pakati pevane giredhi rechina – chinzvimbo chakakomba mune zvedzidzo – vadzidzi vanobva kuzvikoro zvehurombo hwakanyanya vakawana kurasikirwa kwekudzidza zvakapetwa katatu pakuenzanisa kana nevaya vakanyoresa muzvikoro zvehurombo hwakaderera.
KuSevilla East, ruzhinji rwevadzidzi vanobva kumhuri dzakashata dzisina ruzivo rwakasimba rweChirungu, izvo zvinodzikisira kuratidzwa kwavo kwechisikirwo kune mhando yemitauro yekuvandudza mitauro uye mazwi anopihwa nezvikoro uye vana vanobva kumhuri dzakapfuma uye dzakakwira-dzidzo vachiri kuwana kumba panguva yechirwere ichi, akadaro Cecilia Maes, superintendent wedunhu.
Kunyangwe makore ekurwisa zvakaderera kuverenga, ivo vadzidzisi veSevilla East vakashamisika nezvavakaona pakavhurwa dzimba dzekudzidzira dze- -munhu kudzidza kudonha uku.
Vazhinji-magrade echina vakadzokera kuchikoro vachiverenga padanho rimwe chetero sezvavaive mugiredhi repiri pakatanga denda-vachivasiira anodarika maviri magiredhi kumashure ikozvino. Vashoma vakadzora, bvunzo dzinoratidza. Mhedzisiro yechikoro ichangoburwa yekuongororwa bvunzo yakaratidza kuti kwaive nevazhinji-vegiredhi kuseri kwegiredhi-chikamu kuverenga zvinotarisirwa kupfuura vadzidzi mune chero rimwe giredhi.
Mukuru weSevilla East mukuru Erika Twohy akashandisa mari yemubatanidzwa kusimudzira mudzidzisi kupora mudzidzisi wevane -giredhi uye mumwe mushandi kutarisisa pakuverenga kupindira.
Kugadzirisa kudzikira kwakanangana nedambudziko rekufunda, Erika Twohy, mukuru mutsva weSevilla East, akashandisa mari yemubatanidzwa kusimudzira mudzidzisi wekupora wevane -giredhi uye mumwe mushandi wekutarisa pakuverenga kupindira kwakanangana nechina- uye chechipiri-giredhi. Ari kudawo vadzidzisi vese vekirasi uye gumi nevasere vanobatsira pakudzidziswa kuti vadzidziswe muWilson Reading System, chirongwa chinonyanya kusimbisa manzwi.
Makirasi ese izvozvi anosanganisira chinhu chekuverenga, kusanganisira dzidzo yemuviri uye mumhanzi. Mudzidzisi wekurovedza muviri akatanga kubaya mutauro wemuromo mukirasi nekupaza zvinorehwa nemazwi senge “kudzivirira.” Maitiro aya akaitirwa kuwedzera nguva dzese dzekudzidza-kwemunhu uye kunyudza vadzidzi mukuverenga nekuverenga nguva inenge yarasika, Mai Twohy vakadaro.
Dr Maes, superintendent, vakati dunhu iri rakanangana nekudzidziswa kwakanangwa kuitira kuti vadzidzisi vakaita saAmai Layne vazive kudzidzisa hunyanzvi hwekuverenga-giredhi rekutanga kuti vagadzirise vana vegiredhi rechina.
Asi kushomeka kwevashandi mudunhu rese kunoita kuti zviome kugadzirisa zvakakwana dambudziko iri. Ikozvino pane zvinopfuura zana zana uye zvakanyanya kuomarara kutsvaga zvinotsiva. Kana vakawanda vevadzidzisi veSevilla East vaifanira kutora zuva rekumbozorora kuti vadzidziswe muchirongwa chitsva chekuverenga, dunhu raifanira kutumira varairidzi vezvidzidzo, maneja manejimendi uye nyanzvi dze data kuti vatarise makirasi.
Jordan Lopez, chena mask, anogara padhuze nemudzidzisi Katerah Layne mukirasi yekuverenga kuSevilla East.
Yoree Koh / Iyo Wall Street Journal
Mai Twohy havana chokwadi chekuti ivhu revadzidzi vavo rinogona kusvika papi gore rino, uye vanonzwa kumanikidzwa kunyanya kana zvasvika kune vadzidzi vegiredhi rechina vanozoenda gore rinouya kuchikoro chepakati.
“Ndinoona sekunge tapera nguva,” Mai Twohy vakadaro.
Vadzidzi vasiri kuverenga pagiredhi nhanho yechitatu vane mukana wekusiya chikoro chepamusoro uye vanoguma vari mutirongo, makumi emakore ekutsvagisa aratidza. Negiredhi rechina, vadzidzi vanokwanisa kukwanisa kushandisa hunyanzvi hwekuverenga nekunyora kudzidza zvimwe zvidzidzo, zvakaita semasvomhu, zvidzidzo zvemagariro uye sainzi, vadzidzisi vanodaro.
Kukwanisa kunoita vana kuverenga mumakero ekutanga kufungidzira kuti vanozoguma kupi mushure mehupenyu, akadaro Carol Scheffner Hammer, mutevedzeri wedhipatimendi rekutsvaga uye purofesa paTeachers College, Columbia University uyo ane hunyanzvi mumitauro yevana uye kugona kuverenga nekuverenga. .
Kuna Jordan Lopez ane makore mapfumbamwe, kudzidza kure nemusha kwanga kusiri nyore. Iyo internet yaigara ichibuda kana iye aigona kurasikirwa nehurongwa hwake uye opinda muawa rakanonoka. Kashoma kubvunza mibvunzo.
Jordani ndemumwe wevadzidzi vegiredhi rechina mukirasi yaMai Layne uyo ari kuyedza kumbopfuura nhanho yekutanga kuverenga nekunyora. Akatomboverenga panguva yedenda. Akati haana mabhuku kumba kwake.
Cecilia Maes, superintendent weAlhambra Elementary School District, akati dunhu iri rakanangana nekudzidziswa kwakanangana nevadzidzisi kuvandudza hunyanzvi hwekuverenga.
Jordan, uyo anogara nababa vake nasekuru, anomuka pakati pa3 mangwanani na4 mangwanani pamazuva echikoro. Baba vake vanomuka mangwanani kuti vasvike kubasa rake rekuvaka nenguva uye vanosiya Joridhani kumba kwaambuya vake munzira kuti vagomutyaira kuenda kuchikoro. Anoshandisa wee mangwanani maawa paTikTok, dzimwe nguva achigadzira ake ega mavhidhiyo, kusvikira yasvika nguva yekuenda kuchikoro na8: 10am
Mushure mekusvika kuchikoro, Jordan aibvarura bepa opopota kana paine basa rekunyora, vakadaro Mai Layne. Akati haanakidzwe nekuverenga.
Mushure mekunyorwa kwechikoro cheveruzhinji kwakaderera munyika yese gore rapfuura, matunhu echikoro senge ari muLansing, Mich., Vari pasi pekumanikidzwa kuti vadzidzi vanyorese uye vagare vachiita semibvunzo yebhajeti. Mufananidzo: Bart Thomas
“Ndangoverenga zvese zvinotaurwa nemudzidzisi kuti ndiverenge,” akadaro Jordan.
Amai Layne vakaona kutanga kwegore rino rechikoro kuti kudzidza kure kwaimisa sei kukura kwevadzidzi vavo. Rimwe zuva, akakumbira vana kuti vanyora. Nguva pfupi yapfuura, akanzwa chinongedzo chechime chichienda chakatenderedza imba.
“Muri kuitei varume?” vakabvunza mai Layne, vachitarisa tarisa mumba muya vakavhiringika.
Vadzidzi vakapindura: “Tiri kunyora mhinduro yedu.” Vadzidzi vakavhura mamaikorofoni kuti vataure mumaPads avo, ayo aibva ataipa iwo iwo mavara – chimwe chinhu chavaigara vachiita panguva yekudzidzira kure kure gore rapfuura.
Sarudza kufukidza kubva kubazi redzidzo reWSJ padunhu rezvikoro nekudzidza, rakarongedzwa nemukuru webazi Chastity Pratt ndokutumira kwauri kuburikidza neemail.
“Ndiri senge… ‘Tora penzura,’ ‘Mai Layne vanoyeuka, vakashamisika.
Jordan aive mumwe wevadzidzi vaigara vachishandisa maikorofoni “kunyora” mhinduro dzake panguva yechikoro chepamhepo, achiti zvaive nyore nekuti aisaziva kuperetera mamwe mazwi.
Gore rino, aifanirwa kupotsa chikoro kwemavhiki maviri nekuti akaoneswa shamwari iyo yakaratidza hutachiona hweCovid-19 uye yaifanirwa kuiswa kwayo yoga. Vaviri iye naAmai Layne havana chokwadi nezve zvakaitika panguva iyoyo yekuzorora, asi paakadzokera kuchikoro akarega kuita misikanzwa nekupopota. Pakati pechidzidzo chazvino, paakatsamwa kuti anganyora sei mhinduro, Mai Layne vakamudzidzisa kuburikidza nayo sezvaainyora zvishoma nezvishoma izwi rimwe nerimwe. Akareurura kuti haana kugona kunyora capital D’s.
“Iye haazvifarire, asi anoedza izvozvi, uye ndizvo zvega zvandinogona kubvunza,” akadaro.
Chechina-giredhi Priscilla Padilla naJordani Lopez mune masvomhu kirasi kuSevilla East.
Kufambira mberi kwave kunonoka kuzere mukirasi yaMai Layne, asi zviri pachena. Amai Layne vakati pakutanga kwegore vazhinji vevadzidzi vavo vegiredhi rechina vainyora manhamba avo kumashure. Zvino, vadzidzi vaviri chete vanoita. Paakakumbira vana kuti vapereterire mazwi-syllable mazwi akacherekedza mazhinji akaiswa mavhawero akasarudzika.
Mushure memavhiki ekudzokorora kwezuva nezuva neayo iwo makumi matatu kana mamwe mazwi, pane fungidziro shoma. Vanogona kusiyanisa mazwi “dema” uye “musana,” uye “kure” uye “nguva dzose.” Asi vaviri vachiri kuti “pa-ee” pavanoona flashcard rinoti “adya.”
GADZIRA FUNGWA DZAKO
Zvikoro zviri munharaunda mako zvirikuita sei kuti zviparadzane nemhirizhonga inotungamirwa nedenda mukudzidza? Joinha hurukuro iri pazasi.
Priscilla Padilla, 9, akati aifunga kuti aive muverengi ane hunhu kudzamara aona kuti akaiswa muboka revana vakaedzwa padanho rechitatu rekuverenga avo vaifanira kushanda mukuvaka mazwi avo. Aida kuve nevasere vaakadzidza navo mukirasi yechina avo vakaverenga “Bridge to Terabithia,” bhuku, nekuti bvunzo yekuongorora yakaratidza kuti vaive vaverengi vane hunyanzvi.
Kudzidzira pamhepo zvaive zvakamuomera gore rekupedzisira nekuti iyo komputa yaiwanzooma nechando pakati pekirasi uye ainetseka kutarisa, akadaro. Anogovana mubhedhuru nehanzvadzi dzake nhatu uye vabereki vake vanouya kumba panguva dzisina kujairika nekuda kwebasa ravo. Baba vake vanofambisa fenicha uye amai vake vanochenesa dzimba. Vakati vatanga kuverenga maminetsi makumi matatu pazuva vari kumba, sekurudzirwa naAmai Layne, kuti vagone kusimudzira zvakakwana kuti vakwire muboka rekuverenga nekuverenga rinoverengera.
“Ini ndinozviita nekuti ndiri kuda kuenda uko kuitira kuti ndive nenjere kupfuura, zvimwe kupfuura vamwe vanhu,” akadaro Priscilla. “Ndinosuwa kuti handipo.”
Akati anoda kuenda kukoreji uye pamwe aigona kuve hunyanzvi mudzidzisi uye haadi kuti kugona kwake kumudzora.
“Zvakakosha kuverenga nekuti (kana usingakwanise kuverenga zvakanaka) paunenge wakura, unenge uchizonamira,” akadaro.
Nyora ku Yoree Koh pa yoree.koh@wsj.com
Copyright © 2021 Dow Jones & Company, Inc. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. 8cdd8c9a9a9dd9e5ddcddbcdbdbcd8
Categories Latest News Tags Basa Redzidzo, Chikoro, CHIVI, dzidzo, foto-komisheni, General news, Kunyora / Kuverenga, kusakwanisa kuverenga nokunyora, kuverenga, magariro, MUFANANIDZO, munharaunda, nzanga, Sosaiti / Nharaunda, WSJ-PRO-WSJ.com, Zvemagariro Nyaya, zvematongerwo enyika, Zvematongerwo enyika / General Nhau Post navigation